Sida Looga Horto Mashruucyada Waqtiga - Iskuulka ITS Tech
Sida Looga Hortago Mashruucyada Waqtiga
Muddo dheer, saynisku waxa uu muujiyay in aan sameyn karno hal wax uun mar uun kasta. Dhamaan khaas ahaan, waxaan u tagi karnaa kaliya hal qaadasho maskaxeed iyo nidaam kaliya hal talaabo maskaxeed marxalad kasta oo la bixiyay: waxaynu ku hadli karnaa ama akhrin karnaa labadaba labadaba. Waxaan hal arrin ku yeelan karnaa hal mar uun, wax badan oo aan isku qasbino inaan isbeddelno oo aynu ka bilowno hal wax markaa ka dibna soo socota, wax badan ayaannu kharashkeena awood u yeelannaa.
2001, Joshua Rubinstein, Ph.D., Jeffrey Evans, Ph.D., iyo David Meyer, Ph.D. ayaa hogaaminayay oo u qaybiyey afar imtixaan oo dhalinyaradu kor u kiciyeen kala duwanaanshihii kala duwanaa, tusaale ahaan, arimaha xisaabta ama kooxaynta joornaalada. Raadinta dhammaan waxqabadka oo dhan:
Xubnaha ayaa ka lumay waqtigii ay u baahnaayeen inay isbeddelaan iyagoo ka bilaabaya hal goor dabadeedna soo socda.
Maaddaama hawshu ay noqotey mid aad u adag, xubnihii iyaga ka shaqeynayey ayaa waayay wakhti dheeraad ah.
Sidaa awgeed, shakhsiyaadku waxay qaadeen waqti dheer si ay u kala beddelaan khilaafaadka habdhiska ah ee adag.
Kharashka waqtiga ayaa ahaa mid caan ah markii xubnuhu bedeleen waxqabadyo dhexdhexaad ah.
Waa lagama maarmaan in aan mararka qaar ka fogeyno shaqada; run ahaantii, waxaan ku aminaa fahamkayaga garaac xoogan oo ah 25 daqiiqado ah oo lagu qabanayo, shan daqiiqo oo nasasho ah, oo lagu riixay daqiiqado dheeraad ah 25 (rehash ilaa illaa dhammaysashada). Jajabku waa shey gaar ah, si kastaba ha ahaatee leexashadu waa kuwo kale. Fasaxyada waa gaaban, ku hawlan oo fekeraan. Dhibaatadu waxay naga heleysaa naqshadeyn iyo burburinteena hawsheenna.
Meyer ayaa sheegay in xataa xitaa maskaxda maskaxeed oo ay sameeyeen ayagoo udhaxeeya khilaafyada u dhexeeya kharashka waxay ku kici karaan boqolkiiba inta 40 boqolkiiba wakhtiga faa'iido ee qof. Waxay u muuqataa mid aan suuragal u ahayn inaan awood u leenahay inaan dib u eegno dhaqanka dhaqanka si aan u aqoonsanno heerarka ugu sarreeya ee ballansiga iyo dhameystirida hal shaqo ka hor inta aanad bilaabin kale.
Marka laga hadlo suurtagalnimada in ficilkani yahay mid aan looga bixi karin oo furfuran, maxaan awoodi karnaa inaan sameyno si aan hawsha u qabanno waqtigii loogu talagalay? Waxaa laga yaabaa in jawaabta ku haboon ay ahaato tilmaamo keli ah oo isticmaalaya hantida 'helitaanka iyo faa'iidada.
Helitaanka Kheyraadka Bixinta Birmadka kaliya iyo Farsamooyinka Horumarka
Qiimaynta wakhtiga firfircoonida waxaa inta badan la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo dhibcaha keli ah ee la helay xaqiiqda iyo tan ugu fiican. Xaaladda kiisaska ugu fiican, qiimeynta dhibcaha keli ah waxay na siinaysaa boqolkiiba 50 suurtogalnimada in ay ku dhammaato. Waxaan awood u yeelan karnaa fursadahaas dhowr sicir oo adoo metelaya helitaanka hantida iyo waxtarkeeda caadiga ah, taas oo aan ka bartay iyada oo dib loo eegayo waxay u dhexeysaa 72 ilaa 74 boqolkiiba. Waxaan ka faa'iideysan doonaa boqolkiiba 70 boqolkiiba si aan loo fududeyn.
Isku-dheelitirka 1 ee qaadata kaddib, d wuxuu la hadlaa ereyga, wuxuu ka hadlaa qiyaasta farsamooyinka la filayo in uu dhammeeyo hawsha, oo ka hadlaayo helitaanka hantida iyo in uu ka hadlayo faa'iidada caadiga ah ee wado shaqaale xog qarameed. Xaaladda 2 ee d.
Isku dheelitir 1. Qiyaasta Bartilmaameedka Hal Meesha Isticmaalka Ahaanshaha iyo Waxsoosaarida
Isku dheelitir 2. Qiyaasta Bartilmaameedka Hal Meesha Isticmaalka helitaanka iyo Wax-soo-saarka Tusaalaha
Xaaladda 2. Qiyaasta Bartilmaameedka Hal Meesha Isticmaalka helitaanka iyo Wax-soo-saarka Tusaalaha
Nidaamkani waa mid faa'iido leh marka saacadaha la socdo oo la socdo hubin sare iyo shaqadu si caadi ah oo sahlan loo ogaado.
Waan wada ognahay sida dhibaatadu u tahay aqlabiyad badan in ay muujiso, wax kasta oo joogtada ah, saxsanaanta koorsooyinka dhacdooyinka. Iskuduwaha, ama isbeddelka isbedelka, waa duurjoogta dhaqankeena dhaqso leh. Maadaama habdhaqankan adag ee shaqeyntu uusan u muuqan inuu isbeddelayo, waa in aan ka faa'iideysanaa xisaabinta suurtogalka ah.
Waxaa jira habab badan oo loo adeegsado wakhtiyada qaar oo qaar ka mid ah ay ka badan yihiin kuwa kale. Dhamaan masiibooyinka la socda. Waxaan u muuqannahay in aan dhisno qiimeynteenna qiimeynteenna nalalka ugu wanaagsan, taas oo adkeyneysa inaan u diyaargaroobo dhexdhexaadnimada asturan ee qiimeyntaas. Muuqaalka kiisaska ugu fiican, calaamad muujin kaliya ayaa kaliya na siin doonta 50 boqolkiiba guulaha najaxa. Waxaa laga yaabaa in aan kordhino fursadahaas adoo qaadanaya gander ka dib xaaladaha ugu wanaagsan ee aadka u ah iyo inta badan cabsida aadka u xun, marka lagu daro helitaanka guud ee waxtarka iyo waxtarka.
Daryeelaha Cisco Engineers waxay si buuxda ugu tiirsan yihiin shahaadada CCNA